मदन भण्डारीले बनाएको एमाले केपी ओलीद्वारा विघटन, माओवादीले किन मार्‍यो अमर लामा ? – Medianp
मदन भण्डारीले बनाएको एमाले केपी ओलीद्वारा विघटन, माओवादीले किन मार्‍यो अमर लामा ?
मिडिया एनपीप्रकाशित मिति: बिहिबार, जेठ ०३, २०७५०९:२२0
काठमाडौं, ३ जेठ । आज एमालेका तत्कालीन नेता मदन भण्डारी र संगठन प्रमुख जीवराज आश्रितको आज २५ औं स्मृति दिवस । आज एमालेले मदन–आश्रित स्मृति दिवस मनाउँदैछ । तर, मदन भण्डारीले नै बनाएको एमाले र उनले प्रतिपादन गरेको ‘जनताको बहुदलीय जनवाद’ सिद्धान्त आजकै दिन विसर्जन हुँदैछ ।
एमाले र माओवादी केन्द्रले पार्टी एकता गर्न भन्दै दुवै पार्टीको केन्द्रीय समिति विघटन गर्ने सहमति गरेका हुन् । अब एमाले र माओवादी इतिहासमा मात्र सीमित हुने भएको छ । २०४६ मा जनआन्दोलनले सफलता पाएपछि २०४७ सालमा तत्कालीन नेकपा माले र माक्र्सवादीबीच एकता भई ‘एमाले’ गठन भएको थियो ।
एमालेका संस्थापक महासचिव मदन भण्डारी थिए । मदन भण्डारीकै स्मृति दिवसका दिन उनले गठन गरेको एमाले र पार्टीको मार्गदर्शक सिद्धान्त ‘जबज’ विघन र विसर्जन गरिनु संयोग मात्रै हो कि जानीबुझिकन गरिएको हो ? पछि खुल्दै जाला । तर, मदन–आश्रितको दुर्घटनाबाट निधन नभई हत्या भएको भन्ने केपी ओली पार्टीबाट स्थापना गरिएको तत्कालीन जाँचबुझ आयोगका अध्यक्ष र शक्तिशाली प्रधानमन्त्री छन् । अहिले उनी एमालेका अध्यक्ष पनि हुन् । मदन पत्नी विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपति छन् । ओली र भण्डारी दुवै सम्मननीय भएका बेला किन मदन–आश्रितका हत्यारा पत्ता लगाइँदैन ? भन्ने सर्वत्र चासो उत्पन्न भएको छ ।
आजकै दिन २५ वर्षअगाडि चितवनको दासढुंगामा मदन–आश्रितको गाडी दुर्घटना भएको थियो । सो गाडीका चालक अमर लामा थिए । उनी मदन–आश्रित हत्या वा निधनका एक मात्र जीवित साक्षी थिए । उनलाई कीर्तिपुरमा गोली हानी हत्या गरिएको थियो । अमर लामालाई गोली हान्ने सेतो टिसर्टधारी युवाहरूले माओवाद जिन्दावाद ! को नारा लगाएका थिए । आजकै दिन एमाले र माओवादीबीच पार्टी एकताको घोषणा हुँदैछ । यो पनि एउटा संयोग नै मान्नु पर्छ ।
पेटमा लागेको बोसो घटाउन के गर्ने ?